प्रधानमन्त्री देउवाले आगोसँग खेल्न खोजेकै हो ? – Jhilko
गृहपृष्ठ ∕ बिचार ∕ प्रधानमन्त्री देउवाले आगोसँग खेल्न खोजेकै हो ?
झिल्को डटकम मंसीर १०, २०७८ गते ११:०३ मा प्रकाशित
केही दिनअघि एमसीसी पारित गराउने विषयमा दबाब दिने उद्देश्यले नेपालको भ्रमण गरी फिरेका मध्य तथा दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । लुको आग्रहलाई देउवाले सहभागी हुने विश्वास दिलाएका छन् । बालुवाटार स्रोतले जनाएको यो भनाइ सत्य हो भने नेपालले आगोको गोलासँग खेले सरह हुनेछ ।
लोकतन्त्रको नाममा नयाँ अमेरिकी खेमा बनाउन खोजेका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले विश्वका एक सय १० देशहरूलाई निम्तो गरी डिसेम्बर ९–१०मा दुई दिने भर्चुअल शिखर सम्मेलनको आयोजना गरिरहेका छन् । चिनियाँ बुझाइमा एक सय १० मा ताइवानलाई सामेल गराएर अमेरिकाले आगोसँग खेल्ने दुस्साहस गरिरहेको छ । साथै अमेरिकाले विश्वलाई दुई खेमामा बाँड्न खोजेको छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रालयले राष्ट्रपति बाइडनको ‘लोकतन्त्र शिखर सम्मेलन’ले विश्वलाई बाँड्न खोजेको कुरो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझ्न गाह्रो नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयले लोकतन्त्र कुनै गहना होइन जसको प्रभावकारिता र वजनको बारेमा विज्ञापन आवश्यक हुने जनाएको छ ।
रुसको डुमा सुरक्षा तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी समितिका प्रमुख भसिली पिस्कारायोभले पनि लोकतन्त्र शिखर सम्मेलनले विश्वलाई बाँडन खोजेको जनाएका छन् । यो सम्मेलन गरी अमेरिकाका आफ्ना सहयोगीहरूमा पनि विभाजन ल्याउने उनले जनाए ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजिआनले लोकतन्त्रमा कुनै देश विशेषको विशेषाधिकार पेटेन्ट राइट्स नभएको बताए । उनले अमेरिकाले पहिले आफ्ना लोकतान्त्रिक समस्याको समाधान खोजोस भन्ने बताए । अमेरिकाले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताका लागि सबैभन्दा ठूलो ध्वंसकारी खुद अमेरिका आफै भएको बताए । आफू अनुकूल कुनै देश नभए त्यहाँको सत्तालाई आफ्नो भूराजनीतिक र वैश्विक रणनीति अनुसार बनाउने काम लोकतान्त्रिक अमेरिकालाई नसुहाउने विषय भएको झाओको भनाइ थियो ।
यसअघि चीनले ताइवान आफ्नो अभिन्न अङ्ग भएको र यस मामिलामा कोही फसे ऊ आगोसँग खेले बराबर बुझे हुने भनी चेताइसकेको छ ।
बाइडनको लोकतन्त्र शिखर सम्मेलन विभाजनकारी भएको चिनियाँ भनाइ अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले लोकतन्त्रको नाममा सामेल गरिएका देशहरूको जारी गरेको सूचीले नै पुष्टि गरेको छ ।
दक्षिण एसियाली देशहरूमा अफगानिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकालाई सामेल गरिएको छैन् । नेपाल, भारत, पाकिस्तानलाई साम्हेल गरेको छ ।
वैश्विकरूपमा चीन, टर्की र रुसलाई सामेल गरिएको छैन् । चीन र रुस अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी भएको बुझिए टर्की अमेरिकी सैनिक संगठन नेटोको सदस्य राष्ट्र हो, उसलाई सामेल नगरिनुले उसले अमेरिकाको नयाँ खेमा तयार गरिहेको छ । त्यो पनि चीन र एक मात्र चीनको विरोधमा यो खेमा बनाउने काम गरिएको छ ।
ताइवानलाई देशको दर्जा दिएर अमेरिकाले चीनसँग बनाएको कुटनीतिक सम्बन्ध एक चीन नीतिलाई धुलिसात पारिरहेको देखिन्छ । अमेरिकाको ताइवानसँग कुनै औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध रहेको छैन ।
ताइवानमाथिको आक्रमण कसैले गरे त्यसको सुरक्षा गर्ने एक कानुन मात्र अमेरिकाले बनाएको छ ।
कुटनीतिक सम्बन्ध अमेरिकाले चीनसँग कायम गरेको छ । यस आधारमा हेर्दा अमेरिकाले ताइवानसहितको आफूलाई मन पर्ने देशहरूको समूह बनाएर लोकतन्त्रको शिखर सम्मेलनको नाममा चीन विरोधी समूह खडा गरिरहेको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले जारी गरेको सूचीमा अमेरिकाका प्रमुख पश्चिमा सहयोगी देशहरूसँगै भारत, पाकिस्तान र इराक समावेश गरिएका छन् ।
लोकतन्त्रको शिखर सम्मेलनमा सहभागी गराउन बनाइएको सूचीलाई हेर्दा यो कुनै मापदण्डमा आधारित नभइ अमेरिकाले जसलाई लोकतन्त्र भन्यो त्यो लोकतन्त्र हुने शैलीमा तयार गरिएको हो ।
ताइवानलाई अमेरिकाले सामेल गरेपछि यो समूह चीनको निशानामा पर्ने स्पस्ट छ । यसले यो सम्मेलनलाई थप विवादित बनाएको छ । त्यसमा पनि हालै लिथुआनियाले ताइवानलाई मान्यता दिएपछि चीनले आफ्नो कुटनीतिक सम्बन्ध समाप्त पार्ने घोषणा गरेको थियो । यो सम्मेलन चीनलाई एक्ल्याउने अमेरिकी नीतिको एक मात्र हिस्साभित्रको कार्यलाई बाइडनले मूर्तरूप दिन थालेका हुन ।
बाइडनले २१औं शताब्दीमा भूराजनीतिक चुनौती चीन भएको संकेत गर्दै अप्रिलमा अमेरिकी संसदमा बोलेका थिए । यसले पनि बाइडनको यो पहल सिधा चीन विरोधी हर्कत हो । अमेरिकी लोकतन्त्र माथि निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी संसद भवनमा जनवरी ६ मा गराएको आक्रमणको सवाललाई सम्बोधन नगरी यस्तो शिखर सम्मेलन गर्नु कतिपयको भनाइ रहेको छ ।
स्टकहोम आधारित इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर डेमोक्रेसी एन्ड इलेक्टोरल असिस्ट्यान्सले गत सोमबार एक रिपोर्ट जारी गरेको छ । त्यो रिपोर्टमा अमेरिका आफै सर्वसत्तावादी दिशामा जाने गरी शिकार भएको र उसले लोकतन्त्रका कतिपय महत्वपूर्ण मापदण्डहरूलाई कुल्चेको उल्लेख गरिएको छ ।
यो परिवेशमा स्पस्टरूपमा अमेरिकाले चीन विरोधी नयाँ समूहको निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ ताइवानको मामिलामा अगाडि बढ्नु भनेको आगोको गोलासँग खेल्नु बराबर हुने भनेको चीनका
राष्ट्रपति सी चिनफिङले यसबारे चुपचाप बसेको होला भन्ने बुझाइ राख्नु मुख्र्याईं बाहेक अरू के नै हुन सक्छ ? नेपाललाई निम्तो गरिएको विषय अमेरिकाको विदेश विभागको सूचीबाट स्पस्ट भएको छ ।
त्यो भन्दा मुख्य कुरो केही दिनअघि एमसीसी पारित गराउने विषयमा दबाब दिने उद्देश्यले नेपालको भ्रमण गरी फिरेका मध्य तथा दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । लुको आग्रहलाई देउवाले सहभागी हुने विश्वास दिलाएका छन् । बालुवाटार स्रोतले जनाएको यो भनाइ सत्य हो भने नेपालले आगोको गोलासँग खेले सरह हुनेछ । पहिलो कुरो नेपालले एक चीन नीतिको पक्षपाती हो । अर्को कुरो नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिको संस्थापकमध्येको एक हो । यसरी कुनै पनि समूहमा सामेल नहुने नेपालको घोषित नीति हो ।
त्यतिमात्रै होइन नेपाल दुई ठूला छिमेकीको बीचमा रहेको एक भूपरिवेष्ठित देश हो । भूपरिवेष्ठित देशका केही आफ्ना भूराजनीतिक स्वार्थ र स्थिति हुन्छ । यस आधारमा हेर्दा देउवाको सहभागिता नेपाललाई थप चेपमा पारी आगोको गोलामा झोस्नु बाहेक अन्य केही हुन नसक्ने प्रस्ट छ ।
लेनिनको शब र सोभियत स्वास्थ्य विज्ञान
निर्वाचन माथिबाट तल हुनुपर्छ